ILumanu: Thola Abathonya futhi Thola Okuqukethwe Okunethonya | Martech Zone
NgeSonto, Agasti 14, 2016 NgoMsombuluko, Agasti 15, 2016 Douglas Karr
Ukwengeza ukufinyelela kokuqukethwe kwakho kubalulekile. Noma ngabe uzama ukukhulisa amazinga akho e-organic ngokuthi okuqukethwe kwakho kukhonjwe futhi kuxhunywe kumasayithi anegunya eliphezulu, noma ngabe uzama ukwandisa ukufinyelela kwakho kwezenhlalo kuzethameli ezifanele, noma ngabe uzama ukwakha igunya embonini yakho ngokuthola ukushiwo kumuntu onethonya… ukumaketha okunomthelela kufanele.
Ukumaketha komthelela kuhlukaniswe kwaba izingxenye ezimbili ezibalulekile
Obani abathonya enokufinyelela kuzithameli ezinkulu, ezibandakanyekile ozama ukungena phambi kwazo?
Yini okuyingqayizivele nokwaziswa sokuqukethwe lokho kuzoheha ukunaka kwabathonya?
Izindlela ezihamba phambili zokusebenzisa abathonya ngezimo ezahlukahlukene
Inani lomthonya lifana necebo lokusabalalisa imidiya. Abathonya abahlukahlukene bazoba ngabalungele ukumaketha okuhlukile nezinhloso zebhizinisi. Ngezansi kunezinhloso ezimbalwa esihlangabezane nazo kanye neminye imikhuba emihle yokusebenzisa abagqugquzeli abafanele
Ezimayelana Nomphakathi - kushoda ngokuqasha i-ejensi ye-PR ebizayo, usebenzisa uLumanu ukukhomba izintatheli kanye nama-blogger agxile ekuxoxeni ngezindaba zesihloko sakho esithile kubalulekile ekushayeleni isiminyaminya ezenzakalweni ezibalulekile (isib., Isici somkhiqizo omusha, ingqophamlando yezimali, njll). Ngokukhomba izintatheli ezingaba khona nokusingatha ukufinyelela, inkampani izokwazi ukufaka lobo budlelwano ngokuqhathanisa nobenkampani ye-PR. Lokhu kuzobaluleke kakhulu ekuhambeni kwesikhathi ngoba bazokwazi ukubhala ngezici ezengeziwe / izimemezelo
Impendulo Yomkhiqizo Nesici - Abathonya bangongoti futhi bathenjiwe yizethameli zabo, ngokuqonda okujulile isikhala abasimbozayo. Benza amabhodi wokuzwakala amahle kakhulu emikhiqizweni emisha, izici, noma ngisho nasekushintsheni kwemikhombandlela yemikhiqizo ekhona. Sibone imikhiqizo emikhulu isebenzisa abathonya lapho beqonda izinzuzo nezingozi zokungena endaweni entsha. Abathonya bavame ukuba nomdlandla lapho benikezwa ithuba lokunikeza impendulo ngomkhiqizo omusha noma ngokunikela.
Ukudalwa kokuqukethwe - Ukusebenzisa umthelela ekwenzeni okuqukethwe komkhiqizo wakho kunenzuzo eyengeziwe yokuba nokwakhelwa izethameli ezinamandla okukhuthaza okuqukethwe. Noma ngabe kuyisifundo somkhiqizo noma ukuhlaziywa okuncintisanayo, abasebenza ngokufaka amandla kokudala okuqukethwe kuqinisekisa ukuthi okuqukethwe kwakho kuzoba yizinga eliphakeme futhi kubonwe ngabantu abafanele. Icebo lokuthola hhayi kuphela umgqugquzeli ofanele kakhulu, kepha futhi nalowo onomlando wokudala izinhlobo zokuqukethwe okuphumelela kakhulu ofuna ukukudala
Ama-Brand Mentions - Ngokuhlala ku-radar yomgqugquzeli, umkhiqizo ungakhuphula isabelo sabo sezwi. Sibonile indlela engcono kakhulu yokwakha ukwethembeka komkhiqizo wakho futhi siyigcine iwukuthi uhlale uhamba phambili ekunaka izilaleli zakho. Akunandaba ukuthi lezo zilaleli zigcwele ama-CTO noma umama wakho ohlala ekhaya, izindaba zokuvezwa komkhiqizo. Abathonya ngokwemvelo bafuna ukudala okuqukethwe okubandakanyayo, futhi uma ungabasiza ngedatha ethokozisayo noma izingcaphuno zolwazi - kuzokusiza ukuthi ungene phambi kwabantu abaningi.
I-Lumanu yipulatifomu yokuqala futhi ukuphela kwayo yokwakha ukuthonya ngokwezifiso namagrafu wokuqukethwe kumsebenzisi ngamunye, kusihloko ngasinye. Lokhu kusho imiphumela efanele i-hyper eba ngcono ngokuhamba kwesikhathi. Inhloso yabo ukuthatha okokufaka komkhiqizo kwamagama angukhiye bese ukhiqiza abantu abahamba phambili kuyo yonke idijithali nakwezenhlalo, futhi benze ukufinyeleleka nokwakha ubudlelwane kube yinto engenangxabano ngangokunokwenzeka.
ILumanu yakha igrafu ethonya isikhathi sangempela ngokususelwa esihlokweni esinikeziwe. Ngokuya ngenqubo yethu yokuqukethwe okuyisisekelo, uqinisekisiwe ngohlu lwabathonya abenzelwe isihloko sakho - esiba ngcono futhi sijule ngokuhamba kwesikhathi.
Abathonya, idatha yezenhlalo nokuzibandakanya, kanye nokuqukethwe kwabo okuhlobene kakhulu kumane nje kukuchofoze. Ipulatifomu yakhiwe ngomgomo osebenza kahle kakhulu wokubheka i-Influencer njengesamba sokuqukethwe kwabo + amamethrikhi, hhayi nje umlando wabo we-Twitter. Lokhu kuvumela ukufinyelela okwenzelwe kakhulu okukhonjiswe ukuthi kusebenza ngempumelelo ephindwe kabili kunokufinyelela okubandayo.
Ama-algorithms wesimo sobuciko bemvelo yolimi (NLP) akhipha izingqikithi kokuqukethwe okudumile kwesihloko sakho ukuze unikeze umbono wokuthi abantu bahlanganyela ini. Idatha yokuncintisana yezikhangiso ne-CPC inika inkomba yokuthi lowo mgwaqo ubaluleke kangakanani (ukuncintisana okuphezulu kwe-CPC ne-Ad kusho ukuthi abathonya kuleso sikhala babaluleke kakhulu ngoba izethameli ezinentshisekelo kulezi zihloko zingamakhasimende abalulekile).
Izinkampani zabo bonke osayizi ziyahlomula kakhulu ngokungagcini ngokukhomba abathonya abafanele kakhulu kepha futhi nokuzibandakanya ngokuqhubekayo ukukhiqiza imiphumela yangempela yebhizinisi.
Zama uLumanu Mahhala
Tags: ukudalwa kokuqukethwecurateokuqukethwe okukhethiwethola okuqukethwethola abathonyaithonyaukuthonya ukumakethaukuthonya okuthonyaumthelela wegrafuezimayelana Nomphakathi
I-Webflow: Design, Prototype kanye ne-Launch Dynamic, amawebhusayithi asabelayo